Hello Nepal News » पत्रकारसँग लेभान्टेका प्रशिक्षकको मजाक– ‘कृपया ! मेस्सीलाई रोक्ने उपाय भन्दिनुस्’
पत्रकारसँग लेभान्टेका प्रशिक्षकको मजाक– ‘कृपया ! मेस्सीलाई रोक्ने उपाय भन्दिनुस्’
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज लिग लिडर बार्सिलोना र लेभान्टे खेल्दैछन् । सिजनको पहिलो लेगको खेल खेल्न लेभान्टेले बार्सिलोनालाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्दैछ ।
सो खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लेभान्टेको प्रशिक्षक पाको लोपेजले बार्सिलोनाविरुद्धको खेलबारे धारणा राखेका छन् । उनले बार्सिलोना विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरूको टिम भएकाले ऊसँग खेल्न ज्यादै कठिन हुने बताए ।
‘उनीहरूसँग विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीहरूको टिम छ, हामी यो खेल कसरी जित्ने भनेर सोचिरहेका छैनौं । हामी उनीहरूलाई जितबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं,’ लोपेजले भने, ‘हामीसँग खास योजना छैनन्, सामान्य तरिकाले खेल्छौं ।’
तर, बार्सिलोनालाई आफ्नो घरमा गोल गर्न नदिन आफूहरूले ध्यान दिने बताए । ‘हामी उनीहरूलाई गोल गर्न नदिने गरी खेल्छौं । यदि गोल खाएनौं भने भने हामी कम्तीमा १ अंक जोड्न सक्छौं,’ लोपेजले भने, ‘तर, बार्सिलोना अहिले लयमा छ । उनीहरूलाई रोक्न सहज हुनेछैन ।’
लोपेजले मेस्सीलाई रोक्ने भनेर आफूले चिन्ता नगरेको बताए । पत्रकारले मेस्सीलाई रोक्ने योजनाबारे सोधेको प्रश्नमा मजाक गर्दै लोपेजले भने, ‘मेस्सीलाई कसरी रोक्नु ? मलाई थाहा छैन । यदि तपाईंहरूलाई थाहा छ भने कृपया भनिदिनुहोस् । मलाई यसबारे आइडिया छैन ।’
प्रकाशित मिति १६ कार्तिक २०७६, शनिबार ०४:१६